वीरगञ्जमा एक घण्टामै कोरोना परीक्षण, मोबाइलबाटै रिपोर्टबारे जानकारी – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/वीरगञ्जमा एक घण्टामै कोरोना परीक्षण, मोबाइलबाटै रिपोर्टबारे जानकारी
२०७७ भदौ १ गते १३:४५ मा प्रकाशित
नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायका अनुसार जीन एक्सपर्ट प्रविधिबाट स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण भए नभएको जानकारी एक घण्टामा दिन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त यस प्रविधि पनि राम्रो छ । जीन एक्सपर्ट प्रविधिबाट एक साता अघिदेखि नै कोरोना परीक्षण भइरहेको उनले बताए ।
तर यो विधिबाट सबैका लागि परीक्षण भने सम्भव छैन । सामान्य अवस्थामा नर्मल आरटी पीसीआर नै गरिन्छ ।
‘रिएजेन्ट महंगो छ, वीरगञ्जमा तीन सय किट मात्रै आएको छ । सबैका लागि यो गर्न सकिन्न । आकस्मिक अवस्थाका लागि यसको प्रयोग गरिरहेका छौं,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘सघन उपचार कक्षमा उपचाररत, गम्भीर अवस्थाका बिरामी तथा मृत्यु भइसकेको डेडबडी व्यवस्थापनका लागि यसको प्रयोग भइरहेको छ ।’
मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ड डा. उपाध्यायका अनुसार कुनै प्राविधिक समस्या नआएको खण्डमा भदौ १ गते सोमबारदेखि रिपोर्टको जानकारी एसएमएसबाट पठाउने तयारी भइसकेको छ ।
नारायाणी अस्पतालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्रिटिकल केयरका सामग्री पठाएको छ । झण्डै ४ करोड मूल्य बराबरको क्रिटिकल केयरका सामग्री आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
दुई दिनअघि डिजिटल एक्स–रे, एक्स–रे, इन्फ्युजन पम्प, सिरिन्ज पम्प, डायलायसिस मेसिन, अल्ट्रा साउन्ड मेसिन, प्यासेन्ट मनिटर, पल्स अक्सिमिटर लगायत क्रिटिकल केयरका समग्री अस्पतालमा आएको डा. उपाध्यायले जानकारी दिए । फोहोर राख्ने ठूला–ठूला ड्रम पनि अस्पतालमा आएको छ ।